दशैँमा टिकासँगै लगाईने जमराको जुसले कस्ता कस्ता रोग निको पार्छ ? हेर्नुहोस्( भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
दशैँमा टिकासँगै लगाईने जमराको जुसले कस्ता कस्ता रोग निको पार्छ ? हेर्नुहोस्( भिडियो सहित)
दशैँमा टिकासँगै लगाईने जमराको जुसले कस्ता कस्ता रोग निको पार्छ ? हेर्नुहोस् तलको भिडियो हेर्नूहोस…
काठमाडौं । जमरा दशैंमा सांस्कृतिक महत्वले गर्दा उमारिन्छ । तर, अहिले भने जमरा दशैं बाहेक अन्य समयमा पनि बनाउन थलिएको छ। जमरालाई अरु समयमा सांस्कृतिक महत्वले भन्दा पनि स्वास्थ्यको लागि उमार्न थालिएको छ।
जमरा विशेष गरि गहुँ र जौंको बनाइन्छ । घर भित्र नै गहुँ र जौं उमारिन्छ र त्यसलाई उखलेर जुस बनाइन्छ। जुस बनाउँदा जमरा काटेर नभई जरा संगै बनाउनुपर्ने उनीहरु बताउँछन्।
जमराको जुसले प्राणघातक रोगहरु समेत निको हुने विश्वास गरिन्छ। रक्तचाप बढी भएका व्यक्तिले विशेष गरि जौंको जमराको जुस खानाले रक्तचाप घटेर जान्छ । यो बाहेक जमराको जुसले मधुमेह, क्यान्सर, ग्यास्ट्रिक लगायतका रोगहरु निको हुने मानिन्छ।
जमराको जुस पिउनको लागि एउटा स्टलमा दैनिक ४० जना व्यक्ति आउने व्यवसायी बताउँछन् । त्यस्तै, जमराको जुस पिउन थालेपछि ग्यास्ट्रिक कम भएको, शरीर फुर्तिलो हुने ग्राहक बताउँछन्। जमराको जुस पिउन आउनेमा अधिकांशले ग्यास्ट्रिक निको हुने बताउँछन्। पूरा जानकारीको लागि तलको भिडियो हेर्नूहोस।
Prevबृद्ध आमाको चित्कार: बाबु, मेरो छोरालाई ऊखूको लाक्रा रलाठिले हानि-हानि मारे, मैले न्याय पाइन ! (भिडियो रिपोर्ट)
Nextयी हुन् आफ्नै ११ दिनको जिउँदो बच्चा बारिमा गाड्ने पापी आमा, प्रहरीले यसरी समात्यो (भिडियो सहित)
‘नेपाल आइडल’ को ग्रान्ड फिनालेमा बुगीबुगीकी कविता नेपाली र प्रगती यस्तो बबाल नृत्य-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
नेपाल आइडल : अस्मिता अधिकारीले इन्दिरा जोशीकै शैलीमा गाउँदै नाच्दा गर्दा सबैले गरे तारिफ-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
विश्वलाई चकित बनाउदै भियतनामले कोरोनामाथि जित हात पारेर छाड्यो..